ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने दाहाल-नेपालको तयारी ! « Bagmati Online
ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने दाहाल-नेपालको तयारी !
काठमाडौं, २ मंसिर । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मोर्चाबन्दी कसेका छन् । दाहाल नेपाल समूहमा सचिवालयका ५ जना नेता छन् । उनीहरुले ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर सार्वजनिक रुपमै चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनले झनै हलचल मच्चाएको छ । दाहालको प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै दुवै पक्ष आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । ओलीले दाहालको प्रस्तावमा जवाफ दिन जरुरी नभएको उनी पक्षधर नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी गरिसकेका छन् ।
सत्ता ढाल्न खोजे ओलीले कठोर कदम चाल्ने संकेत, नेकपा दुर्घटना नजिक
यता, दाहाल-नेपाल भने सचिवालय बैठक बस्नुअघि नै अब कसरी प्रस्तुत हुने भनेर आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । दाहाल-नेपाल निकट स्रोतकाअनुसार अब बस्ने सचिवालय बैठकमा दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि एक एक गरेर विस्तृत छलफल गर्ने र मंसिर १५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउनेसम्मको रणनीति दाहाल र नेपालले बनाएका छन् ।
नेकपा विवादले सत्ता समिकरण फेरबदल : ओलीलाई कांग्रेसको साथ !
स्रोतले भन्यो, दाहाल र नेपाल अब ब्याक हुने पक्षमा हुनुहुुन्न । उहाँहरु ओलीलाई दुईमध्य एक पदबाट हटाउनेगरि तयारीमा जुट्नुभएको छ । सकेसम्म अध्यक्षबाट हटाउने उहाँहरुको योजना छ । महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्ष रहँदा झनै समस्या हुने भएकोले त्यो भन्दा अघि नै ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउनुपर्छ भनेर अहिले छलफल चलेको छ । यदि दुई अध्यक्ष नै राख्नुपरे माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने तर ओलीलाई अब अध्यक्ष नबनाउने तयारी छ ।
प्रकाशित मिति : २०७७ मङ्सिर २ गते मङ्गलवार
माधवलाई गोकुलको कटाक्ष ‘माकुराले आफ्नै माउ खान्छ‍‍‍‍, बल्ल पर्‍यो माकुरी जालैमा’
फेरि एक पटक ‘प्रधानमन्त्री’ हुने चाहना छ : अध्यक्ष दाहाल